संन्यास लिने/नलिने सोचेको छैन : कामीरिता [अन्तर्वार्ता]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
संन्यास लिने/नलिने सोचेको छैन : कामीरिता [अन्तर्वार्ता]
तत्कालै पुनः आरोहणको मुडमा नभएका उनले अनुमति भने लिइसकेका छन् । पथप्रदर्शक भएर जाँदा उनले फेरि अघि लाग्नुपर्छ ।
वैशाख २६, २०७८ सुरज कुँवर
काठमाडौँ — सगरमाथा आरोहणको २२ औं पटकदेखि विश्वकै सर्वाधिक अग्लो चुचुरो सगरमाथामा सबैभन्दा धेरैपटक चुमेर विश्व रेकर्ड कायम गर्दै आएका कामीरिता शेर्पा अर्को रेकर्ड बनाउने तयारीमा छन् । उनी यतिबेला बेसक्याम्पमा बसेर थकाइ मारिरहेका छन् ।
सोलुखुम्बु, थामेका पर्वतीय पथ प्रदर्शक कामीरिताले शुक्रबार २५ औं पटक चुचुरोमा पुगेर आफैंले २ वर्षअघि बनाएको रेकर्ड ब्रेक गरे । उनीअघि सोलुखुम्बुको थामेकै आप्पा शेर्पा २१ पटकसम्म सगरमाथा आरोहण गरेर संसारमै सर्वाधिक आरोहण गर्ने रेकर्ड होल्डर थिए । ०६८ वैशाखमा २१ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर रेकर्ड बनाएका आप्पाले त्यसपछिका वर्ष श्रीमतीसँग गरेको वाचाअनुसार आरोहणबाट संन्यास लिएका थिए ।
आप्पाको रेकर्डलाई ०७५ जेठ २ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा ब्रेक गर्दै कामीरिताले २२ औं पटक सगरमाथामा पुगेर विश्वमै सर्वाधिक आरोहण गर्ने आरोहीको रेकर्ड बनाए । २४ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक २०५१ सालमा सगरमाथा चुचुरोमा पाइला राखेका कामीरिता झन्डै तीन दशकदेखि नेपाल, भारत, तिब्बत, रसियाका पर्वतीय भेगमा गाइडका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
गत शुक्रबार डोरीको सहायताले आरोहीहरुका लागि बाटो बनेपछि अबको दुई साता सर्वोच्च शिखर आरोहणको सिजन हो । यसपटक सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै ४ सय ८ जनाले अनुमति लिएका छन् । काठमाडौंमा दुई सन्तान, पत्नीसहित डेरामा बस्ने ५१ वर्षीय माउन्टेन गाइड तथा आरोही कामीरिता यस वर्षको वसन्तकालीन सिजनमा पुनः २६ औं पटकका लागि सगरमाथा चुचुरोमा पुग्ने योजनामा छन् । यसअघि उनले चार वटा सिजनमा दुई–दुईपटक र एकै सिजनमा दुईपटक दक्षिणी मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन् । यो सिजनका लागि उनको आरोहण यात्रा पक्कापक्की भने भइसकेको छैन । काठमाडौंको सेभेन समिट टे«क्स प्रालिका लागि काम गर्ने कामीरिताले भारतीय फौजीहरु सम्मिलित एउटा टोलीको टिम लिडर भएर जान पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएका छन् । यसपटक उनी यो सिजनका लागि बाटो बनाउँदै चुचुरोमा पुगेका थिए । शनिबार दिउँसो मात्रै आधार शिविरमा आइपुगेका कामीरिताले आइतबार बिहान कान्तिपुरसँग फोनमा छोटो कुराकानी गरेका छन् ।
आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गर्नुभयो बधाई छ । तपाईंको स्वास्थ्य कस्तो छ ?
– धन्यवाद । म अहिले सगरमाथा आधार शिविरमा साथीको क्याम्पमा छु । मेरो स्वास्थ्य ठीक छ ।
२५ औं पटकको सगरमाथा यात्राको रेकर्डको खुसी आधार शिविरमा झरेपछि पहिला कसलाई सुनाउनुभयो ?
– मैलै पहिले थामेमा रहनुभएका बुवाआमासँग कुरा गरेँ ।
यो सिजनमा बाटो बनाउदै चुचुरोसम्म पुग्दाको यात्रा कस्तो रह्यो ?
–राम्रै भयो । हामीले चाहिँ यसपटक एकै दिनमा ८ हजार उचाइमा रहेको चौथो शिविरबाट चुचुरोसम्मै डोरीको सहायताले बाटो बनायौं । यसअघिका वर्षमा शेर्पाहरुले चौथो क्याम्पदेखी चुचुरोसम्म बाटो बनाउन २ दिन लगाउँथे ।
आरोहीहरुका लागि बाटो बनाउँदै आधार शिविरबाट चुचुरोसम्म कति दिन लाग्यो ?
–जम्मा तीन दिनमा पुग्यौं । बुधबार ५२ सय मिटर उचाइमा रहेको बेस क्याम्पबाट १२ जनाको टोली हिँडेका थियौं । शुक्रबार साँझ ६ बजे चुचुरोमा पुग्यौं ।
तपाईंको रेकर्डलाई कसले पछ्याउँदै छन् ?
मेरै भाइ पर्ने, मेरै कान्छा बाउको छोरा छ । उसले २२ पटक सगरमाथा चढे भन्दै आएको छ । तर डाटामा उसको भनाइ मिलिसकेको छैन ।
–म अब नजाने मुडमा छु तर मेरो टिमका मेम्बरहरुले जानै पर्छ भन्दै छन् । गइहाले भने अबको ४÷५ दिनपछि माथितिर जान्छु होला ।
के तपाईं अब सगरमाथा आरोहण यात्राबाट संन्यास लिँदै हो ?
–अहिल्यै संन्यास लिने/नलिने सोचेको छैन ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ २२:४२
साथी एपबाट घरमै बसी पीसीआर टेस्ट
काठमाडौँ — राइड सेयरिङ एप साथीले कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण घरमै बसी गर्न सकिने सेवा सुरु गरेको छ ।
एपले भाइरसको शंका भएका व्यक्तिका लागि घरमै बसी पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने सेवा ल्याएको जनाएको छ ।
एपले अस्पताल र प्रयोगशालाहरुसँग सहकार्य गरी सर्वसाधारणलाई सुरक्षित सुविधा उपलब्ध गराउन घरबाट पीसीआर स्वाब संकलन गर्न सघाउने बताएको छ ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै यो सेवा सुरु गरिएको कम्पनीका बजार व्यवस्थापन प्रमुख इन्जोल श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा जिल्ला–जिल्लामा सेवा पुर्‍याउने उनले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ २१:४४